पशुपतिको जलहरी सुनले ढाकियो
मुख्य पृष्ठवाग्मती समाचारपशुपतिको जलहरी सुनले ढाकियो
काठमाडौँ / राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूजा आराधना गरी पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले बताए । पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकाले त्यही चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकेको उनको भनाइ छ ।
एक सय आठ किलोको सुनको जलहरी अर्पण गरिएको उनले बताए । यस कार्यका निम्ति ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको पनि सदस्य सचिव डा. ढकालले बताए ।
विगत तीन वर्षदेखि निर्माण भइरहेको काम बुधबार सम्पन्न भएको उनले बताए । सुनको जलहरी अर्पण गर्नका निम्ति विगत पाँच दिन अघिदेखि पशुपतिनाथमा विधिपूर्वक पूजाआजा भइरहेको थियो । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनको जलहरी अनावरण गरेकी हुन् ।
सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सदस्य सचिव डा. ढकालले शिवरात्रिमा यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो भक्तजन नआउने बताए । दर्शनको सहज व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । पशुपतिनाथमा शिवरात्रीको अवसरमा धुम्रपान, मद्यपान तथा लागुऔषध बर्जित गरेको पनि बताए ।